Blender 2.82 batara na nkedo nke mmiri na gas na ihe ndi ozo | Site na Linux
Blender 2.82 batara na nkedo nke mmiri na gas na ihe ndi ozo
E gosipụtara ntọala Blender ụbọchị ole na ole gara aga akụkọ banyere mwepụta nkembipute ọhụrụ nke Blender 2.82, mbipute na abịa na ọtụtụ ndozi na ọrụ, a ọhụrụ ọhụrụ ịme anwansị ngwọta maka liquids na ike ugbu a ka mma mgbanwe data na mmemme ndị ọzọ.
Na nkenke, ụdị a na-eweta mbupụ nke static na animated Mpaghara na USD usoro (Pixar), AI gbasiri mkpọtụ mkpọtụ (naanị kaadị NVIDIA RTX), nhụchalụ nke nnọchite nke EEVEE na-eme na windo eserese, sistemụ simulation ọhụụ (MantaFlow) na ịme anwansị kacha mma nke physics nke uwe.
Otu n'ime atụmatụ ndị bụ isi nke kwụpụrụ na ụdị ọhụrụ a bụ na mmeghe ngwanrọ mepere emepe emechara maka mmiri mmiri na gas Mantaflow.
Ntughari bụ Nils Thurey nke Nka na ụzụ Mahadum nke Munich mepụtara ya jiri ndị nyocha ka etiti maka mmepe nke algorithms ọhụrụ n'ọhịa nke ịme mmiri mmiri. N'ihi na Blender na - ejikọ Mantaflow, ọ ga - erite uru site na nyocha ugbu a n'ọhịa n'ọdịnihu dị nso. Mantaflow agbanweela ngwa eji arụ ọrụ maka mmiri, ọkụ na anwụrụ ọkụ na mbụ.
Ochie oru ka nwere ike kwajuru na tọghatara, ma ụkpụrụ ga-tọgharịa na ndabara ụkpụrụ. Ya mere, ọ na-ike na-atụ aro na-ndabere nke gị faịlụ na mbipute 2.81.
N'aka nke ọzọ, ray nsụgharị nsụgharị engine nke gụnyere na Blender nwere ike ugbu a ịrụ ọrụ ịkatọ na Viewport iji Optix. A na-ewepụ mkpọtụ onyonyo nke ụzọ ụzọ nchọta. Ruo ugbu a, nke a bụ usoro nhazi nhazi ma nwee ike were ọtụtụ sekọnd. N'ihi Optix, ịkatọ ọrụ na ezigbo oge, ma naanị na kaadị Nvidia RTX ma ọ bụrụ na ị jiri OptiX backend, nke na-adabaghị na Nvidia backend.
Dị ka ndị ọzọ Denoisers na Blender, ndị OptiX Denoiser erubeghi maka animations nwere obere nọmba ọnụọgụ. Cycles nwere ike ịmepụta paspọtụ akọwapụtara nkeonwe yana oge ntụgharị na Windows ka nke kachasị nke ọma.
Versiondị nke a Blender 2.82 na-enyekwa mmelite ọhụrụ maka ọrụ ịkpụzi. O kwere omume ugbu a ịtọ nha na ọdịdị nke ọkpụkpọ akpụ akpụ iji mepụta usoro oge niile. Ọzọkwa, ịnwere ike iji ụgbọ elu abụọ n'otu oge iji mepụta ọnụ ọnụ dị elu n'etiti ụgbọ elu abụọ ahụ. Enwere ike ịgbanwe topology site na ịgbaso mmegharị nke ahịhịa.
N’ụzọ doro anya, a banyekwara na “Gris Pencil” Karịsịa, agbakwunyela ndị na-emezi ụzọ ọhụrụ. O nwekwara ike ịmepụta polygon site na ụzọ. Ọ bụkwa mmelite na njirimara onye ọrụ, na-eme ka ọ dị mfe ịnweta opacity, ịgwakọta na ịwepụ ihe ndị dị na ọwa.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile, interface ndị ọrụ zuru ụwa ọnụ enwetawokwa mmelite, gụnyere ịgbakwunye ihe ndabere ndabere mgbe ịpị mpụga nke gizmo ma ọ bụ ọbụna ịgbakwunye gizmos na nchịkọta nchịkọta UV.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele ederede ntọhapụ Na njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye Blender 2.82 na Linux?
N'ikpeazụ, maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị sọftụwia ọhụrụ a, ha kwesịrị ịma nke ahụ mmepe na-enye mfe echichi usoro, nke bu site na nchịkọta nchịkọta. Yabụ iji wụnye ya na sistemụ gị, ị kwesịrị ịnwe nkwado mgbakwunye.
A ga-arụnye nwụnye imeghe ọnụ na ịpị n'ime ya iwu:
Na njikere. Ọ bụrụ na inweela ụdị nke gara aga nke a, a ga-emelite ya na ụdị ọhụrụ ahụ.
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Linux Arch, Manjaro, Arco Linux ma ọ bụ nkesa ọ bụla Arch na-ekesa. You nwere ike ịwụnye ụdị ọhụrụ a ozugbo site na ebe nchekwa Arch.
Naanị ha ga-ede iwu na-esote na ọdụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Blender 2.82 batara na nkedo nke mmiri na gas na ihe ndi ozo
Mutter na Metacity: Window Managers maka Desktop Gburugburu